LES FORCES DE CHANGEMENT : Hanangana sata iraisana hanarenana ny firenena. | Canalnews Madagascar
Home A LA UNE LES FORCES DE CHANGEMENT : Hanangana sata iraisana hanarenana ny firenena.
LES FORCES DE CHANGEMENT : Hanangana sata iraisana hanarenana ny firenena.
By Nirinamai 24, 2017, 23:58 0
Afaka roa herinandro, ho voavolavola ny sata ifampifehezan’ny hetsika « les forces de changement ». Eo ihany koa ny fananganana paika ady entina hanarenana ny firenena izay hiarahana manatanteraka amin’ny fitondrana ankehitriny. « Manomana fiaraha-mitantanana ny hetsika « les forces de changement » fa tsy ekena intsony ny fitantanana ny fiainam-pirenena ankehitriny », hoy i Doudou.
Ny vovonana DFP na Dinika ho Fanavotam-Pirenena no tompon-kevitra amin’ity drafitra ity. Nambaran’ny Filohan’ny DFP hatrany fa ho fanarenana ny firenena dia mila manangana ny paika ady iraisana.
Tao anatin’ny roa volana ny tompon-kevitra no nifanatona tamin’ireo hery velona rehetra, ireo Filoham-pirenena nitondra teo aloha…ka tao anatin’izany no nahaterahan’ny hetsika « les forces de changement ».
Androany, nanantanteraka fivoriana ity farany ho fampahafantarana ny fisiany fa indrindra ny fametrahana ny dingana ho atao ahatongavana any amin’ilay tanjona dia ny fiaraha-mitantana.
Hanaiky izany fiaraha-mitantana izany ve ny Filohan’ny Repoblika?
Previous PostDURRELL WILDLIFE CONSERVATION TRUST: Nohamafisina ny paika ady hiarovana ny sokatra Rere. Next PostMADA VISION: 15% fara-fahakelin’ny fihenam-bidy mandritra ny “Grande Braderie”.